Pixel 4a Specification နဲ့ ရောင်းစျေး သိရပြီ
OnePlus Nord ၊ iPhone SE 2020 တို့နဲ့ အပြိုင် ထွက်ရှိလာမယ့် Pixel 4a အချက်လက် အပြည့်စုံ သိရပြီ
ထွက်မယ် ၊ ထွက်မယ် တကဲကဲနဲ့ အခုချိန်ထိ ရုပ်လုံးပေါ်မလာသေးတာ Pixel 4a ပါ။ ကာရိုနာ ဖြစ်နေလို့ နှောင့်နှေးခဲ့တာ လက်ခံရပေမယ့် အခုဆိုရင် iPhone SE 2020 ၊ OnePlus Nord လို Mid-range ဖုန်းကောင်းတွေ အပြိုင် ဖြစ်နေကြပါပြီ။
ဒီတော့ မေးစရာ ဖြစ်လာတာက OnePlus ကို Google ယှဥ်နိုင်ပါ့မလား မေးခွန်းပါ? သြဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာမယ်လို့ သိထားရပေမယ့် ပေါက်ကြားလာတဲ့ Specification က ဘောင်မတူတဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံးကို ဘယ်လို အသွင်ကွဲသွားစေနိုင်မလဲ?
ဒါပေမယ့် Google ပစ်မှတ်ထားတာ Compact ဖုန်းလို့ ဆိုနိုင်သလို 5.8” မျက်နှာပြင်နဲ့ တဖန် ထွက်ရှိလာဦးမယ့် Pixel ဖုန်းသစ်ဟာ Mid-range တွေ အကြား နေရာတစ်ခု ဖန်တီးလာနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောရတာ OnePlus ဖုန်းဟာ Flagship ခြေရာ လိုက်နင်းနေသလို Pixel မှာကျ နေ့တဓူဝ သုံးစွဲမှုကနေ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်ဝ ထောက်ပံ့ဖို့ ထွက်ရှိလာမယ့် အမျိုးစား ဖြစ်နေလို့ပါ။
ယခုအချိန် လူအများစုက Performance နဲ့ ကင်မရာပိုင်းကိုပဲ အဓိက ထားတတ်ကြပေမယ့် 5.8” Class ဆိုတာ ရှားနေပါပြီ။ စျေးကွက်အတွင်းမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ Budget ဖုန်းတွေတောင် 6.5” Screen သုံးနေချိန် Mid-range ဖုန်းကိုမှ Premium ဆန်တာလေး ရှာနေရင် Pixel 4a ၊ OnePlus Nord နဲ့ Sony Xperia 10 II တို့က ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်စေမှာပါ။
Pixel ဖုန်းသစ်နဲ့ ပေါက်ကြားချက်တချို့မှာ Render ဒီဇိုင်းလည်း ပါဝင်လာသလို အဆိုပါ ပုံရိပ်တွေကို Ishan Agarwal အမည်ရ Twitter User တဦးက ထုတ်ပြခဲ့တာပါ။
Punch-hole နဲ့ပဲ မြင်ရမယ့် အဆိုပါ ဖုန်းမှာ Snapdragon 730G ၊ 6GB RAM နဲ့ 128GB Storage တို့ပါဝင်မယ်လို့ သိရပြီး 3,140mAh Battery အသုံးပြုထားမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
18W Fast Charging စနစ်ပါဝင်မယ့် Pixel 4a မှာ XL မော်ဒယ် မြင်ရနိုင်ချေ မရှိဘူးလို့ ဆိုထားသလို 5.8” OLED Display နဲ့ မိတ်ဆက်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ 12.2MP Sensor အသုံးပြုထားမယ် ပေါက်ကြားထားပြီး 77 FoV ရှိမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဗီဒီယိုပိုင်းအနေနဲ့ 4K@30fps ၊ 1,080p@120fps နှုန်း ရိုက်ကူးနိုင်မယ်။
သေချာတာကတော့ Pixel ထုံးစံအတိုင်း A.I လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ကောင်းမွန်နဲ့ ကင်မရာ စနစ်ကို တဖန်မြင်ရနိုင်ချေရှိပြီး လက်ရှိ အနေထားက OnePlus Nord နဲ့ တည့်ပြောဖို့ ခက်သေးတယ်။ Specs အားဖြင့်တော့ ပိုသာတယ်ဆိုမယ့် $349 ၊ $499 (5G) နဲ့ ရောင်းချလာနိုင်တဲ့ Pixel ဖုန်းသစ်က ဘယ်လိုနေမလဲ?
တန်ဖိုးအားဖြင့် တူညီတဲ့ အနေထားရှိသလို Performance User ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် Nord ကိုပဲ ရွေးကြမှာပါ။ အခု အချက်လက်တွေကလည်း ပြည့်စုံသလောက် ရှိနေပြီဆိုတော့ ရေပန်းစားနေတဲ့ Mid-ranger တွေနဲ့ ဘယ်လို Keep-up လုပ်မလဲ မိတ်ဆက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေရုံပါပဲ။
ARM-based Processor နဲ့ Ultrabook စံနှုန်းန်ကို Apple တဖန် ရိုက်ချိုးဖို့ ဖြစ်လာမလား?